सहकारीमार्फत नमुना स्कुल चलाउँछौं « Sahakari Nepal
सहकारीमार्फत नमुना स्कुल चलाउँछौं
प्रकाशित मिति :2February, 2018 12:17 pm
अध्यक्ष-सगुन शिक्षा सहकारीसंस्था लि., सर्लाही
१ शिक्षासम्बन्धी सहकारीमार्फत के के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारीमार्फत जनताका सबै खालका आवश्यकताहरू पूरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर नै संविधानमा तीन खम्बामा सहकारी राखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तीनवटा खम्बा बराबरी प्रतिस्पर्धी हैसियतको बन्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सर्लाहीमा सगुन शिक्षा सहकारी दर्ता गरेका छौं । अहिलेसम्म १५ सय सदस्य पुगेका छन् ।
५१ हजार सेयर लगानी गरी सदस्य बन्न सक्छन् । अपांगमैत्री अत्याधुनिक विद्यालय भवन बनाएका छौं । विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जोडेका छौं । १७ जना विद्यार्थी बराबर एउटा शौचालयको व्यवस्था गरेका छौं । कक्षाकोठाको सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा अझ खुकुलो, तीन जनाको मात्र डेक्स, बेन्चको व्यवस्था गरेका छौं । जनताकै लगानीमा र जनताकै छोराछोरीका लागि शिक्षा दिँदै केही आम्दानी तथा नाफा हुँदा पनि जनताले नै प्रतिफल पाउने गरी हामी अघि बढेका छौं । नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयास पनि हो यो ।
२ शिक्षा ऐन पनि हालै पारित भएको अवस्था छ, त्यसले सहकारीलाई काम गर्न बन्देज गरेको अवस्था छ नि, तपाईंहरूलाई काम गर्न गाह्रो भएको छैन ?
निश्चय नै काम गर्न गाह्रो छ । सहकारीकर्मीले एउटा उपलब्धि संविधानमै प्राप्त गरेका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा नेपालको अर्थतन्त्र थेग्ने सवालमा तीन खम्बे अर्थनीति बनाइएको छ तर संविधानको मर्म र भावनाअनुसार ऐन, नियमनहरू बनेका छैनन् । कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि हरेक कानुनमा सहकारीमैत्री बनाउन आवश्यक छ । तत्कालको परिस्थितिमा समस्या छ । अहिले पनि विद्यालय सोझै सहकारीमा छैन । कम्पनीअन्र्तगत विद्यालय भए पनि व्यवस्थापन सहकारीको छ । भौतिक संरचना, खेलकुद, जग्गा सहकारीको नाममै छ ।
सहकारी ऐन हालै पारित भए पनि शिक्षा सहकारीको विस्तृत व्यवस्थापनमा बोलेको अवस्था छैन । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सहकारीलाई काम गर्न दिने छ भन्ने परेको छ । हिजो हुँदै नहुनुभन्दा अहिले केही कुरा उल्लेख छ । ऐनमा संस्थागत, गुठीगत, निजी र सहकारी गरी चार प्रकारका विद्यालयहरू दर्ता गर्न सकिने अवस्था छ । अनुगमन, नियमन गर्न सकिने कुरा पनि उल्लेख छ । हिजोको भन्दा अहिले ऐनमै केही कुराको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सहकारी आउन सक्ने अवस्था बढ्दै गएको मैले पाएको छु ।
३ तालिम, शिक्षाको कुरा राखिए पनि अझै पाठ्यक्रममा सहकारी राख्न सकिएको अवस्था छैन्, यसका लागि के गर्नुपर्छ ?
अगुवा सहकारीकर्मी र सहकारी क्षेत्रका विज्ञ साथीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा तलदेखि माथिसम्म कोर्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चित्रबाट पनि सहकारीको अवधारणा सिकाउन सकिन्छ । विद्यालयस्तरमै पढाइ सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पाठ्यक्रम नै विकास गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रक्रिया पूरा नगरी काम सुरु गर्न त पाएन ऐन आउनुभन्दा अघि पनि शिक्षा सहकारी दर्ता भएका छन् । सहकारी तालिम र शिक्षाका लागि काम गर्ने २१ वटा सहकारी छन् । गैंडाकोटमा सञ्चालित विजय विकास शिक्षा सहकारीेले कक्षा ११ र १२ मा सहकारीको शिक्षा ऐच्छिकरूपमा पढाउन सुरु गरेको छ । अन्य केही विद्यालयमा पनि सुरु भएको छ । त्यतिमात्र गरी सहकारी शिक्षा पर्याप्त हुने अवस्था छैन । सानो कक्षादेखि नै पढाउन आवश्यक छ ।
४ ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीमा कुनै भिन्नता पाउनुभएको छ ?
सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा अघि बढेको छ । सहरी क्षेत्रमा खुलेका पनि समुदायमा आधारित छन् र गाउँमा पनि । सीमित व्यक्तिको हातमा भएका सहकारीमा समस्या छन् । यो सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई गाउँमा पनि छ । ज्ञानसीप कम भएकाले गाउँका सहकारीमा समस्या आउन सक्छ । नियमन, नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुनसुकै क्षेत्रमा सबै व्यवसाय सफल छैनन् । निजी क्षेत्रका व्यवसाय लामो समयदेखि अभ्यासमा रहे । सहकारीको अभ्यास २०४८ पछि मात्र हो । नौलो भएका कारण पनि र संगठित समूहले गलत प्रचार गरेका कारण पनि सहकारी बदनामी हुन पुगेका हुन सक्छन् । सहकारी क्षेत्रमा मात्र कमी कमजोरी भएको पनि पक्कै होइन । त्यसैलाई आधार बनाएर देशभरिका संस्था एउटै हुन् भन्ने भन्नुहुन्न ।
५ बचत सहकारीलाई उत्पादनतर्फ कसरी जोड्न सकिन्छ ?
विगतमा पनि ऐनमा समस्या थियो । पुँजीको मापदण्ड बनाएर बचतको पैसा पनि परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको अवस्था ऐनले खुला गरेको थिएन तर पछिल्लो समयमा पारित भएका ऐनमा केही खुला भएको छ । सहकारीप्रतिको ज्ञान र आत्मीयता पनि कम भएकाले सहकारीमैत्री अन्य नीतिनियमहरू बन्न सकिरहेका छैनन् ।
घिमिरे जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. सर्लाही, र सगुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)